ကျေးဇူးတင်ပါတယ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့အာဖရိက၏အကြီးအတိုက်ကြီးအတွက်ခရီးစဉ်အပေါ်နေစဉ်သည်ငါတို့အဘို့ဆုတောင်းပဌနာသောသူမည်သည်မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်. သခင်ဘုရားသည်သနားသောသူတို့အားဆုတောငျးခကျြမြားစှာကိုပြန်ပြော, ခြောက်ထောင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိသည့်သက်ရောက်မှုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်အတူသငျသညျအသုံးပြု. အဆိုပါခရီးစဉ်ယခုနှစ်ကုန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်အိမ်မှာယနေ့ညခေါင်းနှစ်လုံးနေကြတယ်.
ကျနော်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးသွားဘို့နှင့်ကျန်းမာရေးအဘို့သင့်ဆက်လက်ဆုတောင်းချက်တွေကိုတန်ဖိုးထားချင်ပါတယ်. ကိုအနည်းငယ်လည်းကောင်းစွာခံစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်ငါတို့သည်အိမ်မှာကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်စေလို. ကျနော်တို့ခရီးစဉ်အကြောင်းကိုသင်တို့ရှိသမျှကိုပြောပြမယ့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်မျှော်လင့်. ထို့နောက်အချိန်အထိငါတို့သည်သင်တို့၏ဆုတောငျးခကျြတန်ဖိုးထား
Daniel mtombosola • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Moby • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Njerucathy • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
It is suchachallenge to see and witness how you live your lives poured out to Christ. Rich is your reward… may He bless you and your families with abundant health, အာမ.
Bradleydmv • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kristy Cothran • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:44 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
rebecca • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Cera Ngunjiri • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Josiah • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:45 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Pray that you guys continue to be strengthened as you serve Him, even us Paul was strengthened by the Lord (2 တိ 4:17). Really blessed by you guys in KE!
Boyd Lawrence Zimba • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Lusayo • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Alexsakala • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 7:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်